Soomaalidu waa geesiyaal waa been fakatay: Ninkii nooloow taariikhda daris si aan berri mar kale loogu aayin! – Radio Daljir
Soomaalidu waa geesiyaal waa been fakatay: Ninkii nooloow taariikhda daris si aan berri mar kale loogu aayin!
Febraayo 19, 2020 3:47 g 0
Waxaa jira erey hees hawleed ay haweenka marka ay guryaha ka shaqaysanyaan ku heesaan. Waxaa ka mid ahaa: midka geesiya ha guursan, marka geela la qaado, gebgeb buu u ordaa, goobtaa la wadhaa, markaasaad goblantaa!
Geesiga ay bulshada Soomaaliyeed taqaan waa geesigaas waranka ku dhiiraan, waxaa se la ogaaday in uusan kaasi geesi ahayn ee uu yahay axmaq; geesigu se yahay qofka qaata go’aamo dhaxalgal ah oo masiirkiisa nololeed taabanaya. Soomaalidu se marna ma yeelin go’aamo geesinimo leh oo ay go’aammo mustaqbalkooda saameeya ku qaataan.
Tusaale: Qodobadaan kooban waa kuwii taariikhdii dhowayd ina soo maray ee aynu fursadahooda soo luminay. Bare sare Yaasiin Shiikh Muuse oo ahaa hormuudkii kulliyadda siyaasadda iyo istiraatijiyadda ee Jamacaddii Ummadda ayaa mar aan la sheekaystay maalin dhowd i xasuusiyey qodobada:
Ururkii SYL ee xornimo doonka khaladkii ugu weynaa ee uu galay waxay ahayd markii ay Ingiriiska oo dhulkii Soomaaliyeed isku haystay ay cayriyeen, kaddibna Talyaani oo laga wada saaray geyiga ay soo ceshadeen
Sida taariikhdu qoreyso 1946 markii dagaalkii labaad dhammaaday, Ingiriiska oo waddamadii guulaystay ahaa ayaa Soomaalida u soojeediyey in ay isaga la joogaan oo uu xornimo gaarsiiyo. Ma aynu yeelin, hagardaamadii inaga raacday waa taas illaa iyo maanta ina dabasocota
Markale 1964 ayaa Ingiriisku soojeediyey in Soomaalidu xiriir dhow la yeelato, dhulalkii Somali Galbeed iyo NFD-na wadahadal ka furaan. Soomaalidu mar kale waa diidday talooyinkii
1977 markii jabhaddii Soomali Galbeed dhul badan xoraysteen waddankii la oran jiray Midowgii Soofiyeeti isaga oo danaynaya labada waddan ee Itoobiya iyo Soomaaliya ayuu u soojeediyey in Soomaalida iyo Itoobiya wada hadlaan, dhulka muranku ka taaganyahna si uun loogu heshiyo. Mar kale Soomaalidu waa ay diiday taladii Soofiyeetka
1986 shirkadihii shidaalka ee Maraykanku waxay dawladdii Kacaanka u soojeediyeen saami-qaybsi ku aaddan shidaalka iyo khayraadka Soomaaliya. Dowladdii kacaanku waa ay diidday, waxaana la sheegaa erey wefdigii shirkadaha shidaalka ka socday yiraahdeen oo ahaa, “waxaad hadda diiddeen idinka oo intaan ka tamar yar ayaad wax ka liita yeeli doontaan.”
Jabhadihii dawladdii Kacaanka ku kacay iyo dawladdu wadahadalo waa iska diideen. Ururadii jabhaduhu markay waddanka qabsadeen nabad iyo wax wadaag in ay samaystaan waa ay diideen
Golihii Maxkamadaha Islaamiga iyo dowladdii Cabdullaahi Yuusuf waxba waa iska yeeli waayeen
Akhriste intaas oo dhan iyo kuwo ka sii badan oo jiraba waxaan u soo qaatay si aan farta ugu fiiqo fursad kale oo maanta hortaal madaxda Somaliland. Fursaddaasi waa in ay heshiis iyo isfaham la gaaraan dowladda Soomaaliya
Arrinta goosashada Somaliland, marka xaqiiq laga hadlo ma ahan Soomaalida kuwa leh go’aanka in la wada joogo ama la kala tago. Siyaasi Soomaaliyeed iyo dadweyne midna talo gacan uguma jirto. Waddamada dowladnimada ‘Jinni’ ee aan ku wareernay dabada ka riixaya ayaa in Soomaaliya la isku hayo u arka in ay ku jirto maslaxaddoodu iyo tan gobolkuba.
Tusaale: Haddii maanta Soomaaliya la kala gooyo, cidda ku xigta ee kala googo’aysaa waa Itoobiya, Kenya iyo ciddii kale ee ay badanyihiin khilaafyada qowmiyadeed ee ka dhex yaal, waxayna goonigoosadka Afrika noqon doonaan tusbax xadhigga goostay. Waa taas tan reer galbeedku aysan marna u rabin in ay arrintaas isku furaan. Waxa Geeska Afrika ka socdana Soomaalida, Itoobiya iyo Ereteriyaanku midna waxba kama baddeli karaan.
Saas oo maanta xaal yahay, taariikhda dhowna na bareysaa, anna maanta aan talo ku soojeedinayaa in siyaasiyiinta Somaliland ay qaataan go’aan qaraar. Waana suurtogal in dadka reer Somaliland ay maanta ka xumaadaan go’aankaas; laakiin sannado dhow oo soo socda kabacdi midhahooda la arko.
Haddii aysan Somaliland saas yeelin, ninkii nooloow taariikhda danbe ka qor wixii arrini noqoto.
Qore: Maxamed Xasan Cirro | Email: [email protected]
Siyaasadda & Dhaqaalaha 470 Wararka 18910
Warka Caweysin iyo Maxamuud Cabdi Ibraahim, Daljir Boosaaso (dhegayso | daawo )
Maraykanka oo Soomaaliya ka caawinaya la dagaalanka Ayaxa